Koshesa Upenyu Sezvinoita Mwari (Mabasa 15:20) | Rudo rwaMwari
“Rambai Muri Murudo rwaMwari”
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Altai Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Japanese Jula Kabiye Kachin Kamba Kannada Kazakh Kekchi Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kosraean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Laotian Lhukonzo Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Miskito Mixe (North Central) Mizo Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Venda Vezo Wallisian Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Unokoshesa Upenyu Sezvinoita Mwari Here?
“Kwamuri ndiko kune tsime roupenyu.”​—PISAREMA 36:9.
1, 2. (a) Chipo chipi chinokosha chatakapiwa naMwari? (b) Nei kukwanisa kunzwisisa zvinotaurwa neBhaibheri kuchinyanya kukosha mazuva ano?
BABA vedu vokudenga vakatipa chipo chinokosha zvikuru chokuti isu vanhu tikwanise kuvatevedzera. (Genesisi 1:27) Chipo ichocho chinoita kuti tinzwisise kubatsira kunoita zvinotaurwa neBhaibheri. Kana tikazvishandisa, tinogona kukura mukunamata tova vanhu vanoda Jehovha uye vane ‘simba rokunzwisisa rakarovedzwa kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa.’—VaHebheru 5:14.
2 Kunzwisisa zvinotaurwa neBhaibheri chinhu chinokosha, kunyanya mazuva ano, nokuti nyika yaita manyama amire nerongo zvokuti kunyange mitemo ikawanzwa sei, haingagoni kugadzirisa nyaya dzose dzinenge dzamuka. Ruzivo rwezvokurapa ndiwo mumwe muenzaniso wenyaya dzakadaro, zvikurukuru kana toreva nezvemishonga inogadzirwa neropa uye nzira dzokurapa pachishandiswa ropa. Iyi inyaya inokosha uye inoda kufungisiswa nomunhu wose anoda kuteerera Jehovha. Kunyange zvakadaro, kana tichinzwisisa zvinotaurwa neBhaibheri zvinoenderana nenyaya yacho, tichakwanisa kusarudza nouchenjeri zvichagutsa hana dzedu uye zvichaita kuti tirambe tiri murudo rwaMwari. (Zvirevo 2:6-11) Ngatikurukurei zvimwe zvezvinotaurwa neBhaibheri panyaya iyi.
UPENYU NEROPA ZVITSVENE
3, 4. Utsvene hweropa hwakatanga kutaurwa riini muMagwaro, uye chii chinoita kuti rive dzvene?
3 Jehovha akatanga kuzivisa kubatana kwakaita upenyu neropa, uye utsvene kana kuti kuyera kwazvo, pakaurayiwa Abheri naKaini. Mwari akati kuna Kaini: “Teerera! Ropa romunun’una wako riri kushevedzera kwandiri riri panyika.” (Genesisi 4:10) Mukuona kwaJehovha, ropa raAbheri raimiririra upenyu hwake hwakanga hwadimburirwa panzira noutsinye. Saka zvinoita sokuti ropa raAbheri raishevedzera kuna Mwari kuti atsive munhu akarideura.—VaHebheru 12:24.
4 Pashure peMafashamo aNoa, Mwari akapa vanhu mvumo yokudya nyama yemhuka asi kwete ropa. Mwari akati: “Nyama, kana inoupenyu hwayo, iro ropa rayo, musaidya iyo. Zvirokwazvo ropa renyu, roupenyu hwenyu, ndicharitsiva.” (Genesisi 9:4, 5; Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona) Murayiro iwoyo unoshanda kuvanhu vose vakabva kuna Noa kusvika kune variko nhasi. Unosimbisazve zvakanga zvambotaurirwa Kaini naMwari, zvokuti upenyu, kana kuti mweya wezvisikwa zvose hunomiririrwa neropa. Murayiro iwoyo unozivisawo kuti Jehovha, tsime roupenyu, achatonga vanhu vose vasingakoshesi upenyu neropa.—Pisarema 36:9.
5, 6. Mutemo waMosesi wairatidza sei kuti ropa idzvene uye rinokosha? (Ona bhokisi rakanzi “ Koshesa Upenyu Hwemhuka.”)
5 Pfungwa mbiri idzi dzinokosha dzakaratidzwa muMutemo waMosesi. Pana Revhitiko 17:10, 11, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona rinoti: “Munhu upi noupi waveimba yaIsraeri, kana wavatorwa vagere pakati pavo, unodya ropa ripi neripi, ndichatonga munhu uyo unodya ropa, ndimubvise pakati porudzi rwake. Nokuti upenyu hwenyama huri muropa; ndakakupai iro paatari, kuti riyananisire mweya yenyu nokuti iropa rinoyananisira nokuda kwoupenyu hurimo.” *—Ona bhokisi rakanzi “ Ropa Rine Simba Rokuyananisa,”
ROPA RINE SIMBA ROKUYANANISA
MuShoko raMwari, ropa rinotorwa sokuti ndihwo upenyu. Saka, pane kuti apiwe mhosva yokutyora mitemo yaJehovha, mutadzi wechiIsraeri ainge apfidza aigona kupa chibayiro chemhuka paatari yaMwari. (Revhitiko 4:27-31) Chibayiro ichocho chaiyananisira zvivi zvake asi kwete zvachose.
Sokushandiswa kwarakaitwa muBhaibheri, shoko rokuti “kuyananisa” rinopa pfungwa ‘yokuchinjanisa’ kana kuti ‘kuvhara,’ tingati semavhariro anoita chivharo chinonyatsopindirana nepachinovhara. Zviri pachena kuti hapana mhuka yaigona “kuvhara” zvivi zvomunhu zvakakwana kana kuti kuyananisa. Zvisinei, zvibayiro zvemhuka zvaifananidzira chibayiro chaizouya chokuyananisa kwakakwana.—VaHebheru 10:1, 4.
Kuyananisa ikoko kwakavapo “nokupiwa kwomuviri waJesu Kristu kamwe chete zvachose.” (VaHebheru 10:10) Upenyu hwakakwana hwaKristu paaiva munhu, huchimiririrwa “neropa rinokosha, rakafanana neregwayana risina gwapa uye risina ruvara,” hwaienzana zvakakwana noupenyu hwakaraswa naAdhamu. (1 Petro 1:19) Saka nyaya yakaruramiswa nenzira inonwisa mvura, inoratidza rudo uye zvakaita kuti tiwane “kununurwa kusingaperi.”—VaHebheru 9:11, 12; Johani 3:16; Zvakazarurwa 7:14.
6 Kana ropa remhuka yainge yaurayiwa rikasashandiswa paatari, raifanira kudururirwa pasi. Saka zvaifananidzira kuti upenyu hwaidzorerwa kuMuridzi wahwo. (Dheuteronomio 12:16; Ezekieri 18:4) Zvisinei, cherechedza kuti vaIsraeri vaisazofanira havo kuedza kubvisa chero kanongonzi karopa panyama yemhuka. Chero bedzi mhuka yacho yainge yachekwa uye yabudiswa ropa zvakanaka, muIsraeri aigona kuidya aine hana yakachena, sezvo ainge aremekedza Mwari, uyo anopa upenyu.
7. Dhavhidhi akakoshesa sei utsvene hweropa?
7 Dhavhidhi, ‘munhu aidiwa nomwoyo waMwari,’ ainzwisisa maonero aMwari pamusoro peropa. (Mabasa 13:22) Mumwe musi paaiva nenyota, varume vake vatatu vakapinda nechisimba mumusasa wevavengi vavo, vachibva vachera mvura mutsime ndokumuvigira. Dhavhidhi akaita sei? Akabvunza kuti: “Ko, iri harisi ropa ravarume vakaendako vachiisa upenyu hwavo panjodzi here?” Mukuona kwaDhavhidhi, mvura iyoyo yaitova ropa revarume ivavo. Saka, kunyange zvazvo aiva nenyota, “akaidururira pasi kuna Jehovha.”—2 Samueri 23:15-17; Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi.
8, 9. Maonero anoita Mwari upenyu neropa akachinja here pakatanga ungano yechiKristu? Tsanangura.
8 Makore 2 400 Noa apiwa mutemo weropa uye makore 1 500 pashure pesungano yoMutemo, Jehovha akafemera dare rinodzora reungano yevaKristu vokutanga kunyora kuti: “Mudzimu mutsvene nesu tasarudza kusawedzera mumwe mutoro kwamuri, kunze kwezvinhu izvi zvakakodzera, kuti murambe muchirega zvinhu zvakabayirwa zvidhori, ropa, zvinhu zvakadzipwa uye ufeve.”—Mabasa 15:28, 29.
9 Zviri pachena kuti dare rinodzora rainzwisisa kuti ropa idzvene uye kuti kurishandisa zvisiri izvo kwaiva kutadza kwakangofanana nokunamata zvidhori kana kuita unzenza hwepabonde. VaKristu vechokwadi nhasi vanotendawo izvozvo. Uyezve, nokuti vanoshandisa zvinotaurwa neBhaibheri, vanoita kuti mwoyo waJehovha ufare pavanosarudza zvokuita panyaya dzine chokuita neropa.
KUSHANDISWA KWEROPA PAKURAPA
Ndingatsanangura kuna chiremba ndichitii nezvezvandakasarudza pamusoro pokushandiswa kwezvikamu zviduku zveropa?
10, 11. (a) Zvapupu zvaJehovha zvinoona sei kuwedzerwa ropa sezvariri kana kuti zvikamu zvaro zvikuru? (b) VaKristu vangasiyana maonero avo panyaya dzipi dzine chokuita neropa?
10 Zvapupu zvaJehovha zvinoziva kuti ‘kurega ropa’ kunoreva kuti havabvumi kuwedzerwa ropa uye kuti havapi ropa ravo kuti rizowedzerwa vamwe kana kuti richengetwe vozoriwedzerwa. Vachiteerera mutemo waMwari, havabvumiwo zvikamu zvina zvikuru zvinoumba ropa zvinoti: masero matsvuku, masero machena, maplatelets, uye plasma.
11 Mazuva ano zvikamu izvozvo zvina zvava kugona kupatsanurwa kuva zvikamu zviduku zvinozoshandiswa nenzira dzakasiyana-siyana. MuKristu angabvuma zvikamu zviduku izvozvo here? Anozviona seropa here? Mumwe nomumwe anofanira kuzvisarudzira panyaya iyi uye nedzimwewo dzakadai sehemodialysis (kucheneswa kweropa romurwere weitsvo nomuchina), hemodilution uye cell salvage kana ichiitwa neropa rako pachako asi risina kumbotanga rachengetwa.​—Ona Mashoko Okuwedzera panyaya inoti “Zvikamu Zviduku Zveropa Uye Nzira Dzokuvhiyiwa.”
12. Tinofanira kuona sei uye kuita sei nezvenyaya dzehana?
12 Nyaya dzokuti munhu mumwe nomumwe anozvisarudzira hadzikoshi kuna Jehovha here? Dzinokosha, nokuti ane hanya zvikuru nezvatinofunga uye zviri mumwoyo medu. (Verenga Zvirevo 17:3; 24:12.) Saka kana takumbira Jehovha kuti atitungamirire tonyatsotsvaka mashoko ose nezvomumwe mushonga kana kuti nzira yokurapwa nayo, tinofanira kuteerera hana yedu yakadzidziswa neBhaibheri. (VaRoma 14:2, 22, 23) Ichokwadi kuti vamwe havafaniri kutimanikidza kuti tiite zvinoda hana dzavo, uyewo isu hatifaniri kubvunza kuti, “Ungaita sei dai waiva ini?” Panyaya dzakadaro, muKristu mumwe nomumwe “achatakura mutoro wake.” *—VaGaratiya 6:5; VaRoma 14:12; ona bhokisi rakanzi “ Ndinoona Ropa Sechinhu Chitsvene Here?”
NDINOONA ROPA SECHINHU CHITSVENE HERE?
Rugwaro rwungakutungamirira: ‘Regai ropa.’—Mabasa 15:20.
Ndingatsanangura sei kusiyana kwezvikamu zvikuru zveropa nezvikamu zviduku? *
Nei ndichifanira kuzvisarudzira kubvuma kana kuramba zvikamu zviduku zveropa kana kuti dzimwe nzira dzokurapwa pachishandiswa ropa rangu?​—VaRoma 12:2; VaGaratiya 6:5.
Ndingatsanangura sei kuna chiremba wangu chikonzero chinoita kuti ndibvume kana kuti ndirambe zvikamu zviduku zveropa?—Zvirevo 13:16.
MITEMO YAJEHOVHA INORATIDZA KUTI NDIBABA VANE RUDO
13. Mitemo yaJehovha nezvaanotaura zvinoratidzei nezvake? Ipa muenzaniso.
13 Bhaibheri rinoratidza kuti Jehovha anopa mitemo nekuchenjera uye kuti ndiBaba vane rudo vane hanya nevana vavo zvikuru. (Pisarema 19:7-11) Kunyange zvazvo mutemo ‘wokurega ropa’ usina kupiwa nezvikonzero zvoutano, unotidzivirira pazvinetso zvinowanzovapo panowedzerwa munhu ropa. (Mabasa 15:20) Kutaura chokwadi, vakawanda vari mumabasa okurapa vanoti kuvhiya pasina kuwedzera ropa ndiyo “nzira yemandorokwati” kupfuura dzose dziriko mazuva ano. VaKristu vechokwadi vanotoona izvozvo zvichitsigira kuti Jehovha ane uchenjeri hwakadzama uye ndibaba vane rudo.—Verenga Isaya 55:9; Johani 14:21, 23.
14, 15. (a) Mitemo ipi yairatidza kuti Mwari aida vanhu vake? (b) Ungashandisa sei zvaitaurwa nemutemo nezvekudzivirira njodzi?
14 Pamitemo yakapiwa vaIsraeri vekare naMwari, yakawanda yacho yairatidza kuti aiva nehanya nevanhu vake. Somuenzaniso, akapa murayiro wokuti dzimba dzevaIsraeri dziiswe karusvingo kanodzivirira padenga radzo kuti pasaita tsaona, sezvo paiitirwa zvinhu zvakawanda. (Dheuteronomio 22:8; 1 Samueri 9:25, 26; Nehemiya 8:16; Mabasa 10:9) Mwari akarayirawo kuti nzombe dzaitunga dzichengetedzwe. (Eksodho 21:28, 29) Kusateerera mirayiro iyi kwairatidza kusakoshesa zvachose upenyu hwevamwe uye kwaigona kuguma kwakonzera mhaka yeropa.
15 Ungashandisa sei zvaitaurwa nemitemo iyi? Wakambofunga here nezvemotokari yako, matyairiro aunoita, zvipfuyo zvako, musha wako, paunoshandira, uye nzira dzaunozvivaraidza nadzo? Mune dzimwe nyika, tsaona ndidzo dzinowanzouraya vechiduku, kazhinji kacho zvichikonzerwa nokungozvipinza munjodzi dzaigona kudziviswa. Zvisinei, vechiduku vanoda kuramba vari murudo rwaMwari vanokoshesa upenyu uye havanakidzwi nezvinhu zvinopinza munjodzi. Havaiti upenzi hwokufunga kuti munhu muduku haana chinomuwana. Asi, vanonakidzwa nouduku vachidzivisa zvinhu zvinovapinza mumatambudziko.—Muparidzi 11:9, 10.
16. Mashoko api ari muBhaibheri anoshanda panyaya yokubvisa pamuviri? (Onawo mashoko omuzasi.)
16 Kunyange upenyu hwomwana asati aberekwa hunokosha mukuona kwaMwari. MuIsraeri yekare, mumwe munhu paaikuvadza mukadzi ane pamuviri zvokuti aifa kana kuti mwana ari mudumbu ofa, Mwari aizvitora sokuponda, uye nyakuuraya aifanira kuripa “mweya nomweya,” kana kuti upenyu noupenyu. * (Verenga Eksodho 21:22, 23.) Saka funga kuti Jehovha anonzwa sei paanoona vana vasati vaberekwa vasingaverengeki vari kuurayiwa nemaune nokubviswa kwepamuviri gore negore, vakawanda vavo vachifira yokuti vabereki vavo vanenge vachida kusununguka kuita unzenza.
17. Unganyaradza sei munhu akabvisa pamuviri asati adzidza zvinoda Mwari?
17 Zvisinei, zvakadini nomukadzi akambobvisa pamuviri asati ava kuziva chokwadi cheBhaibheri? Hazvichaiti kuti Mwari amukanganwire here? Kana! Munhu anopfidza zvechokwadi anovimba kuti achakanganwirwa naJehovha zvichibva paropa raJesu rakadeurwa. (Pisarema 103:8-14; VaEfeso 1:7) Kristu pachake akati: “Handina kuuya kuzoshevedza vanhu vakarurama, asi vatadzi kuti vatendeuke.”—Ruka 5:32.
18. Bhaibheri rinoratidza kuti chii chinonyanya kuita kuti ropa rakawanda rideurwe?
18 Kunze kwokungoti tirege kukuvadza vamwe, Jehovha anoda kuti tibvise ruvengo mumwoyo yedu, runova ndirwo rwunokonzera kuti ropa rakawanda rideurwe. Muapostora Johani akanyora kuti: “Munhu wose anovenga hama yake muurayi,” kana kuti imhondi. (1 Johani 3:15) Munhu akadaro haangogumiri pakuivenga chete asi kuti anototi dai yafa. Ruvengo rwake rungazooneka nemakuhwa anoparadza aanoita kana kuti kunenera zvinhu zvisipo zvokuti kudai chaiva chokwadi waari kunenera wacho aizotongerwa pakaoma naMwari. (Revhitiko 19:16; Dheuteronomio 19:18-21; Mateu 5:22) Saka zvinokosha kwazvo kuti tibvise zvakaipa zvose zvatinofungira vamwe zvingava zviri mumwoyo yedu!—Jakobho 1:14, 15; 4:1-3.
19. Munhu anotungamirirwa nezvinotaurwa neBhaibheri anoona sei magwaro akadai saPisarema 11:5 naVaFiripi 4:8, 9?
19 Vaya vanokoshesa upenyu sezvinoita Jehovha uye vanoda kuramba vari murudo rwake havaitiwo zvekurwa nenzira ipi zvayo. Pisarema 11:5 rinoti: “Mweya [waJehovha] unovenga munhu wose anoda zvechisimba.” Ndima iyoyo haisi kungotiudza nezvounhu hwaJehovha; ine mashoko anotiudza mararamiro atinofanira kuita. Inoita kuti vanoda Mwari vasiyane nevaraidzo ingaita kuti vafarire zvekurwa. Saizvozvowo, mashoko okuti Jehovha ‘ndiMwari worugare’ anoita kuti vashumiri vake vazadze pfungwa dzavo nemwoyo nezvinhu zvinodiwa, zvakanaka, uye zvinorumbidzwa, izvo zvinoita kuti pave norugare.—Verenga VaFiripi 4:8, 9.
TAMBIRA KURE NEMASANGANO ANE MHAKA YEROPA
20-22. VaKristu vanoona sei nyika, uye nei vachiiona saizvozvo?
20 Mukuona kwaMwari, nyika yose yaSatani ine mhaka yeropa. Masangano ayo ezvematongerwo enyika, ayo anofananidzirwa muMagwaro nezvikara zvinotyisa, auraya mamiriyoni asingaverengeki evanhu, kusanganisira vashumiri vaJehovha vakawanda. (Dhanieri 8:3, 4, 20-22; Zvakazarurwa 13:1, 2, 7, 8) Vachidyidzana nemasangano aya akafanana nezvikara, vemabhizimisi nevesayenzi vanoshanda kuti vagadzire zvombo zvinoparadza zvinotyisa, vachiwana mazakwatira emari. “Nyika yose iri musimba reakaipa” zvechokwadi!—1 Johani 5:19.
21 Sezvo vateveri vaJesu ‘vasiri venyika,’ vanoramba vasingatsigiri zvachose zvematongerwo enyika uye hondo, vanodzivisa mhaka yeropa nekusauraya munhu ivo pachavo kana kuti kubatana neruzhinji pakupara mhaka yeropa. * (Johani 15:19; 17:16) Uye vachitevedzera Kristu, havadzoreri kana vatambudzwa nevamwe. Asi kuti, vanoda vavengi vavo, vachitovanyengeterera.—Mateu 5:44; VaRoma 12:17-21.
22 Uye vaKristu vechokwadi vanodzivisa zvachose kubatanidzwa ‘neBhabhironi guru,’ mubatanidzwa wezvitendero zvose zvenhema, rinova sangano rine mhaka yeropa kupfuura mamwe ose. Shoko raMwari rinoti: “Mukati maro makawanikwa ropa revaprofita nerevatsvene nerevaya vose vakaurayiwa panyika.” Saka tinonyeverwa kuti: “Budai mariri, vanhu vangu.”—Zvakazarurwa 17:6; 18:2, 4, 24.
23. Kubuda muBhabhironi Guru kunorevei?
23 Kusiyana neBhabhironi Guru hakurevi kungodzimwa zita muchechi mawanga uri. Kunosanganisirawo kuvenga zvinhu zvakaipa zvinobvumirwa nezvitendero zvenhema kana kuti zvazvinotsigira pachena, zvakadai sounzenza, kupindira mune zvematongerwo enyika, uye kutsvaka pfuma kunoratidza makaro. (Verenga Pisarema 97:10; Zvakazarurwa 18:7, 9, 11-17) Nyaya idzi dzinowanzoita kuti ropa rakawanda rideurwe!
24, 25. Mwari anoshandisa chii kuti aratidze ngoni dzake kumunhu anopfidza anenge apara mhaka yeropa? (b)Izvozvo zvinotiyeuchidza nezveurongwa hupi hwunotaurwa muBhaibheri?
24 Tisati taziva kunamata kwechokwadi, tose zvedu taitsigira nyika yaSatani nenzira dzakasiyana-siyana, saka taitopara mhaka yeropa. Zvisinei, sezvo takachinja nzira dzedu, tikatenda muchibayiro chaKristu ndokutsaurira upenyu hwedu kuna Mwari, takakanganwirwa uye ava kutidzivirira mune zvokunamata. (Mabasa 3:19) Kudzivirirwa ikoko kunotiyeuchidza nezvemaguta okupotera anotaurwa muBhaibheri.—Numeri 35:11-15; Dheuteronomio 21:1-9.
25 Urongwa ihwohwo hwaishanda sei? Kana muIsraeri akauraya mumwe wake netsaona, aifanira kutizira kurimwe remaguta okupotera. Vatongi vakagadzwa pavaipa mutongo, nyakuuraya netsaona aifanira kugara muguta rokupotera kusvikira mupristi mukuru afa. Ipapo ndipo paaizosununguka kugara kwaaida. Uyu muenzaniso wakazonaka wengoni dzaMwari uye wokukoshesa kwaanoita upenyu hwomunhu! Mazuva ano, maguta iwayo okupotera anofananidzwa neurongwa hwaMwari hwechibayiro chaKristu chorudzikinuro, uhwo hunoita kuti tidzivirirwe kana tatyora mutemo wake pamusoro poutsvene hwoupenyu neropa tisingazivi. Unokoshesa urongwa ihwohwo here? Ungaratidza sei kuti unohukoshesa? Imwe nzira ndeyokurudzira vamwe kuti vabvume urongwa hwaMwari hwekudzivirira, “kutambudzika kukuru” zvakwadai kuswedera.—Mateu 24:21; 2 VaKorinde 6:1, 2.
KOSHESA UPENYU NOKUPARIDZA MASHOKO OUMAMBO
26-28. Mamiriro edu ezvinhu nhasi akafanana papi neomuprofita Ezekieri, uye tingaita sei kuti tirambe tiri murudo rwaMwari?
26 Mamiriro ezvinhu evanhu vaMwari nhasi anotiyeuchidza nezvomuprofita wekare, Ezekieri, uyo akapiwa naJehovha basa rokuva murindi weimba yaIsraeri. Mwari akati: “Unofanira kunzwa shoko rinobva mumuromo mangu, wovapa nyevero inobva kwandiri.” Kudai Ezekieri aizorega kuita basa rake, aizova nemhaka yeropa revanhu vaizoparadzwa paizotongwa Jerusarema. (Ezekieri 33:7-9) Asi Ezekieri akateerera saka haana kupara mhaka yeropa.
27 Nhasi takatarisana nokuguma kwenyika yose yaSatani. Saka, Zvapupu zvaJehovha zvinoziva kuti ibasa uye kuti chikomborero kuzivisa “zuva rokutsiva” kwaMwari pavanoparidza mashoko oUmambo. (Isaya 61:2; Mateu 24:14) Uri kunyatsobatanawo nevamwe pakuita basa iri here? Muapostora Pauro akanga asingaiti zvokutamba nebasa rake rokuparidza. Ndosaka akati: “Ndakachena paropa revanhu vose, nokuti handina kurega kukuudzai zvose zvakasarudzwa naMwari.” (Mabasa 20:26, 27) Ndiwoka unonzi muenzaniso wakanaka wokuti titevedzere uyu!
28 Kana tichida kuramba tiri murudo rwababa vedu Jehovha, zviri pachena kuti hatingogumiri pakukoshesa upenyu neropa. Tinofanirawo kuramba takachena, kana kuti tiri vatsvene, mukuona kwake, sezvatichaona muchitsauko chinotevera.
^ ndima 5 Ichitaura nezvemashoko aMwari okuti “upenyu hwenyama huri muropa,” imwe magazini inonzi Scientific American inoti: “Kunyange zvazvo mashoko aya ari ekufananidzira, tikanyatsozvitarisawo tinoona kuti rudzi rwoga rwoga rwemasero eropa runodiwa kuti upenyu huvepo.”
^ ndima 12 Ona Mukai! yaOctober 2006, mapeji 19-28, yakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
^ ndima 16 Vanyori vemaduramashoko eBhaibheri vanoti mashoko echiHebheru akashandiswa “anonyatsoratidza zviri pachena kuti hazvingaiti kuti areve kufa kwomukadzi wacho chete.” Cherechedzawo kuti, Bhaibheri haritauri kuti zera romwana wacho ari mudumbu ndiro raishandiswa naJehovha pakupa mutongo.
^ ndima 21 Ona Chitsauko 5, chinoti “Tingaramba Sei Takaparadzana Nenyika?.”
^ ndima 70 Kana uchida mamwe mashoko akawanda, ona Mashoko Okuwedzera panyaya inoti “Zvikamu Zviduku Zveropa Uye Nzira Dzokuvhiyiwa.”
KOSHESA UPENYU HWEMHUKA
Kunyange zvazvo Jehovha achitibvumira kuuraya mhuka kuti tiwane nyama nezvokupfeka kana kuti tizvidzivirire kuti dzisatikuvadze, hatifaniri kudziuraya zvachero, asi kuti tinofanira kuzviita nemutsa. (Genesisi 3:21; 9:3) Hatidi kuita somuvhimi aiva noutsinye ainzi Nimrodhi, uyo aingouraya mhuka zvokunakidzwa. (Genesisi 10:9) Asi kuti tinofanira kutevedzera Jehovha uyo ane hanya nemhuka, kunyange shiri duku.​—Jona 4:11; Mateu 10:29.
Mwari akaratidza kuti aiva nehanya nemhuka muMutemo waMosesi. (Eksodho 23:4, 5, 12; Dheuteronomio 22:10; 25:4) Ichitaura zvinoenderana noMutemo iwoyo, Zvirevo 12:10 inoti: “Munhu akarurama ane hanya nechipfuwo chake, asi zviito zvakanaka zvowakaipa utsinye.” Vakaipa vose vava pedyo kutsakatiswa pamwe chete nezviito zvavo.
Nei Tichifanira Kuva Vatsvene?
Wakambovhiringidzika here kana kufinhwa pawaiverenga bhuku raRevhitiko? Pfungwa dzinokosha dziri muna Revhitiko dzinogona kukubatsira kuti uve mutsvene.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Unokoshesa Upenyu Sezvinoita Mwari Here?
Tsamba Inobva kuDare Rinodzora
CHITSAUKO 1 “Kuda Mwari Kunoreva Izvi”
CHITSAUKO 2 Ungaramba Sei Uine Hana Yakanaka?
CHITSAUKO 3 Ida Vaya Vanodiwa naMwari
CHITSAUKO 4 Nei Tichifanira Kuremekedza Vane Masimba?
CHITSAUKO 5 Tingaramba Sei Takaparadzana Nenyika?
CHITSAUKO 6 Kusarudza Kwaungaita Varaidzo Yakanaka
CHITSAUKO 7 Unokoshesa Upenyu Sezvinoita Mwari Here?
CHITSAUKO 8 Mwari Anoda Vanhu Vakachena
CHITSAUKO 9 “Tizai Ufeve”
CHITSAUKO 10 Kuroorana Chipo Chinobva Kuna Mwari Ane Rudo
CHITSAUKO 11 “Kuroorana Ngakukudzwe”
CHITSAUKO 12 Taura ‘Zvakanaka Zvinovaka’
CHITSAUKO 13 Mhemberero Dzisingafadzi Mwari
CHITSAUKO 14 Iva Akatendeseka Muzvinhu Zvose
CHITSAUKO 15 Fadzwa Nekushanda Nesimba
CHITSAUKO 16 Rwisanai naDhiyabhorosi Nemanomano Ake
CHITSAUKO 17 ‘Zvivakei Pakutenda Kwenyu Kutsvenetsvene’
MASHOKO OKUWEDZERA Mabatiro Atinofanira Kuita Munhu Akadzingwa
MASHOKO OKUWEDZERA Kufukidza Musoro Kunoitwa Riini Uye Kuchiitirwei?
MASHOKO OKUWEDZERA Kusaruta Mureza, Kuvhota, Uye Basa Rehurumende
MASHOKO OKUWEDZERA Zvikamu Zviduku Zveropa Uye Nzira Dzokuvhiyiwa
MASHOKO OKUWEDZERA Kukurira Tsika Yokuita Bonhora
MASHOKO OKUWEDZERA Zvinotaura Bhaibheri Nezvokurambana Uye Kuparadzana
MASHOKO OKUWEDZERA Kugadzirisa Kusawirirana Munyaya Dzebhizimisi
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku “Rambai Muri Murudo rwaMwari”
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Rambai Muri Murudo rwaMwari”
Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvemhuka
Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. MITEMO YEMASHANDISIRE | MUTEMO WEMACHENGETERWO EMASHOKO EMURIDZI